आत्मरक्षा तालिम र हिंसा अन्त्यको अपेक्षा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / आत्मरक्षा तालिम र हिंसा अन्त्यको अपेक्षा
आत्मरक्षा तालिम र हिंसा अन्त्यको अपेक्षा
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय October 10, 2018	0 131 Views
अहिले दे शै भर महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरु बढिरहे का छन् । बलात्कार र बलात्कार पश्चात हत्याका कहालीलाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहे का छन् । ससाना दूधमुखे बालिकादे खि बृद्ध महिलासमे त यौ न हिंसाको शिकार भइरहे का छन् । कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कार पश्चात हत्या भएको घटनाले दे शै तताएको छ ।
कञ्चनपुरमा मात्र हो इन ठीक यही समयमा पो खरामा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार पश्चात हत्या, ललितपुर गो दावरी जंगलमा १३ वर्षीया बालिका र सप्तरीमा छ वर्षीया बालिका बलात्कारका जघन्य अपराधका घटना भएका छन् । दे शै भर बढिरहे का बलात्कार र बलात्कार पश्चात हत्याका घटनाले हरे क संवे दनशील नागरिकको शीर निहुरे को छ । दुःखको कुरा जघन्य अपराधका यस् ता घटनामा समे त अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको दे खिँदै छ । अपराधीलाई गरिएको संरक्षणले दण्डहीनता मौ लाउँदो छ । पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय दिइ दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारको न्यूनतम जिम्मे वारीबो ध नदे खिँदा नागरिकहरु निराश भएका छन्, आक्रो शित बन्दै गएका छन् ।
दे शै भर महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना बढिरहे का बे ला दे शको सुदूरपश्चिम सात नम्बर प्रदे श यतिबे ला महिलाहरुका लागि आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम शिविर चलाएर चर्चामा छ । महिला अधिकारवादी संघ संस् थाहरुको समन्वयमा राष्ट्रिय गो जुरियो कराते दो संघ, ने पालले आयो जना गरे को महिलाका आत्मरक्षा शिविरमा प्रदे श सरकारको सहकार्य छ । आत्मरक्षा तालिम व्यक्तिलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्न सहयो गी हुन्छ ।
ससाना भैपरी आउने अप्ठ्यारा प्रतिकार गर्न पनि शारीरिक तन्दुरुस् तीले सहयो ग पु¥याउँछ नै  । आफ्ना नागरिकलाई स् वस् थ तन्दुरुस् त राख्न, भैपरी आउने अप्ठ्यारा प्रतिकार गर्न सक्षम बनाउन सरकारका तर्फबाट लगानी हुनु नराम्रो पनि हो इन । यसअर्थमा आत्मरक्षा तालिमको सधंै जरुरी छ । तर दे शमा बढ्दै गएको महिला हिंसा अन्त्य गर्न आत्मरक्षा तालिमले सघाउ पु¥याउने कुराको बहसको अर्थ भने छै न । मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरे र शुरु गरिएको यो आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमले महिलाहरु शारीरिकरुपले स् वस् थ बनाउन मद्दत पुग्ने छ । तर महिला हिंसा अन्त्यका लागि भने मुख्यमन्त्रीले आत्मरक्षा तालिमबाहे क समाजमा महिलालाई हे नेर् पुरातन दृष्टिको ण बदल्न सहयो ग गनेर् काम नगरी सुख छै न ।
महिलामाथि हिंसा किन बढिरहे को छ ? हिंसा बढ्नुको कारण के हो भन्ने गहिराइमा नपुगी र ती कारणको पर्याप्त संबो धन नगरी हिंसा अन्त्य हुँदै न । महिलाहरुमाथि बढ्दो यौ न हिंसाका कारण उनीहरु शारीरिकरुपमा कमजो र भएकै कारण मात्र हो त ? पुरुष ‘बलियो जात’ र महिला ‘कमजो र जात’ भएकै ले हिंसा बढे को हो त ? हिंसाबाट मुक्ति पाउन बलियो बने र प्रतिकार गर्नु नै पनेर् अवस् था हो त ? यदि बलियो बने र प्रतिकार गर्नुको विकल्प नहुने हो भने ससाना दूधे बालिका र बृद्धाले आफूमाथिका यौ न हिंसा सहरै बस् ने ? यो मानसिकताबाट कहिले सम्म काम गनेर् ? बलात्कार, यौ न हिंसा या अरु कुनै पनि हिंसा त्यो व्यक्ति कमजो र भएर मात्र हुने हो इन । कमजो रमाथि शासन गरे र आफू बलियो बन्ने समाजमा हिंसा हुने हो  । बलियाहरुले शक्तिको दुरुपयो ग गर्दा समाजमा हिंसा मौ लाउने गरे को हो  । महिला हिंसाको सन्दर्भ पनि करिब–करिब यही हो  । हिंसा त्यस् तो समाजमा हुन्छ जहाँ कमजो रलाई पीडा दिएर आफू बलियो बन्ने हो डबाजी चल्छ । महिलालाई शक्तिहीन बनाएर महिलामाथि विभिन्न नाममा शासन गनेर् परम्परा, मूल्य र सो च नबदल्दै महिलाबिरुद्धका हिंसा अन्त्य हुँदै नन् ।
समाजका नागरिक एकले अकोर् लाई आफू समान नागरिक सम्झने सो चको विकास, सो अनुरुप आचरण, व्यवहार र संस् कार निर्माणको कामको थालनी महिलाहिंसाविरुद्धका अति आवश्यक काम हुन सक्छन् । कुरीति र कुसंस् कारको अन्त्यका लागि प्रभावकारी अभियान आवश्यक हुन्छ । समाजमा कमजो र रहे को समूहलाई जो गाउन उसमाथि हिंसा गनेर् समूह, व्यक्ति र संरचना बदल्न सरकारको इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । महिला सशक्तिकरणका लागि आत्मरक्षाको तालिम एउटा सानो कार्यक्रम हुनसक्छ । तर महिला हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा विद्यमान विभे दयुक्त सो च परिवर्तनमा जो ड हुनपर्छ । महिलालाई यौ नवस् तुको रुपमा हेनेर् सो च बिरुद्ध काम नगदैर् बलात्कारविरुद्धका कामले कसरी सार्थकता पाउलान् ? स् थानीय, प्रदे श तथा के न्द्र सरकारले ध्यान पु¥याउन सके महिला हिंसा अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो कि ?
Previous: गाउँमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउँदा विद्यार्थी हर्षित
Next: दशैं सांस्कृतिक पर्व हो